Iinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka- Iingcebiso zeFashoni kumadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
Iinwele ezimnyama eziluhlaza
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, Imizila
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kwizinwele zakhe Yinto exhaphakileyo nakubantu abangazinzanga abangafuni kuya kungabonwa. Kuya kufuneka uqale kwinto yokuba ayingowona mbala uqhelekileyo, kodwa iya isomelela ngakumbi ngovelwano. uluntu lwethu.
Lo mbala uqhekeza umhlaba, phawula loo nto ulutsha kunye nembonakalo ebukhali, apho ngalo lonke ixesha sifika ukubona iinwele ezininzi ezinalo mbala kwaye zinemibala eyahlukeneyo kwaye zenza iimilo eziwohlokileyo. Ngokubanzi, sele kukho uluhlu olubanzi lwabathengi abafuna lo mbala kwaye babheje ekuxubeni kunye nezinye iithowuni zombala.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngoobani iinwele eziluhlaza ezinokubonakala zintle? Ngokwesiqhelo ilungele wonke umntu, Kodwa ukuba uneempawu zeetoni ezikhanyayo kunye namehlo, ngokungathandabuzekiyo ngumbala wakho. Nangona kunjalo, ukuba iimpawu zakho zimdaka, inokuthelekiswa nombala ohlaza okwesibhakabhaka oza kuthambisa ubuso bakho. Kuzo zombini iimeko iya kuvelisa umfanekiso wexesha elizayo.
1 Ungazifumana njani iinwele eziluhlaza
2 Iinwele ezimnyama eziluhlaza
3 Iingcebiso ngaphambi kokuba udaye ekhaya
4 Vavanya ukuba iinwele zakho ziyakwazi na ukuxhathisa
5 Iingcebiso zokukhathalela iinwele zakho emva konyango
Ungazifumana njani iinwele eziluhlaza
Ukufezekisa ithoni eluhlaza okwesibhakabhaka kubalulekile ukuba iinwele isiseko esimibala, Kodwa ukuba iinwele zakho sele ziyiplatinam blonde, awuyi kuyidinga inkqubo enjalo. I-bleach yeenwele yile nkqubo apho umbala omnyama weenwele ususwe ukuze wenze ithoni elula kakhulu, enje iseyile emhlophe.
Kule nkqubo, imidiya yemichiza ukuba i-pigment isebenza, apho iinwele ziya kukhanya. Phakathi kwezi mveliso, i-hydrogen peroxide kwiindawo ezahlukeneyo kunye nemveliso yokukhanya kufuneka isetyenziswe.
Eli nyathelo lokuqala kubalulekile ukufezekisa iinwele zethu ezintle zefantasy, kunye nethoni eluhlaza okwesibhakabhaka. Xa siphumelele eso siseko ngesandi sokukhanya, singasebenzisa eyethu umbala oluhlaza. Ukuyidaya, kuya kufuneka ukhumbule ukuba iinwele zizele kakuhle ngedayi ukuze zonke iinwele zifane, zinombala ofanayo.
Ukuba umbono kukufumana iinwele ezimnyama eziluhlaza, Siza kuqala nge-bleaching ngokuqhubekayo ukusuka kwiingcambu ukuya ekupheleni kweenwele. Ukuguqulwa kombala kuya kuba namandla amancinci kwiingcambu apho siya kubavumela ukuba babe mnyama. Njengoko sirhuqa umbala ukuya esiphelweni, le ithoni yokukhanya iya kuthatha ngaphezulu. Njengokuchukumisa okokugqibela, iya kusala kuphela kumbala ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Kukho abantu ababhejayo ngombala oluhlaza ngaphandle kokujika umbala. Inokufezekiswa, kodwa hayi ngendlela efanayo. Siza kuqaphela ukuba iinwele ezimnyama ezinombala oluhlaza ziya kufumana loo mbala, kodwa ngokugqibezela okuya kusikhumbuza ukubonakalisa. Ke ngoko, ingcambu emnyama emnyama iya kuhlala iya kuthoba kancinci ithoni eluhlaza njengoko isondela kwiingcebiso.
Iingcebiso ngaphambi kokuba udaye ekhaya
Ukufumana iinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka kunika inkangeleko emnandi, kodwa nakweyona mibala inzima ukuyifaka kwizinwele. Ukufezekisa ithoni eluhlaza okwesibhakabhaka ngee-shades ezahlukileyo esele siphawule ukuba kuya kufuneka wenze i-bleaching. Gcina ukhumbula ukuba iblitshi ikumgangatho olungileyo.
Xa kuziwa ekuthengeni idayi eluhlaza, kufuneka uqiniseke ukuba uyayithenga idayi ngobuninzi. Ngale ndlela siya kuba nakho ukufezekisa ithoni ecacileyo nenqwenelekayo eblue.
Gwema ukusebenzisa iblitshi kwamanye amalungu omzimba ngaphandle kweenwele. Imimandla apho le mveliso ingenakusetyenziswa ikakhulu ngamashiya kunye neenkophe.
Vavanya ukuba iinwele zakho ziyakwazi na ukuxhathisa
Kubalulekile ukuba ungayijongi le ngcaciso. Ukuba uthathe isigqibo sokudaya ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba iinwele zakho zinako zixhase zonke iinkqubo umbala omnyama.
Ukuzibeka ezandleni zengcali yeyona ndlela ilungileyo yokuba uvavanywe. Inkqubo yokukhanyisa ukufezekisa ithoni ekhanyayo inokuba nzima kwaye inde. Kuxhomekeka kubume beenwele kunye nombala, kunokuba yimfuneko imibala eyahlukeneyo Ndide ndifumane ithoni.
Ukuba iinwele zakho zilungile kwaye zithambile, kunokuba yimfuneko icotha kancinci. Oku kuyakuthatha iiveki kwaye kancinci kancinci ukuze iinwele ziyichase le fomu yokuhombisa kakuhle. Ungafunda ukuba i-bleaching isetyenziswa njani kwinqaku lethu ngendlela yokwenza idayi Izinwele ezingwevu.
Iingcebiso zokukhathalela iinwele zakho emva konyango
Ukunyamekelwa kweenwele ezintle kufanelekile. Awunakho ukusebenzisa nayiphi na ishampu kodwa kunoko imveliso ekhethekileyo yeenwele ezinemibala kwaye loo nto ayinangqumbo kwiinwele, inezithako zendalo kwaye ayinayo imichiza.
Enye ingcebiso yile ungazihlambi iinwele zakho yonke imihla kuba yenza umbala unxibe kwaye ukuba ingazama Sebenzisa amanzi abandayo, kuba ubushushu bunokomisa iinwele nolusu kwaye bunokuchaphazela nokunxiba.
Ukusetyenziswa kwe imeko kukwabalulekile, ukuthintela iinwele ukuba zingomi kunye nombala weendiza. Khumbula ukuyisebenzisa kuphela kwizinwele zakho hayi kwi-scalp. Njengenqaku lokugqibela, kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuphinda ubambe umbala kufuneka kube rhoqo, kuba umbala ubuthathaka kwaye uthanda ukubuna ngokukhawuleza. Kodwa zama ukuyichukumisa okungenani kanye ngenyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iinwele ezimnyama eziluhlaza
Iidinala ezinempilo zokunciphisa umzimba
Khetha ezona zibuko zelanga zibalaseleyo zamadoda ngeli hlobo